Domperidone jekiseni - China Ningbo Second Uwandu hwemakemikari
Operation Manual pamusoro Domperidone jekiseni Veterinary 【Zita Veterinary Drug】 【Common Name】: Domperidone jekiseni 【Chirungu Name】: Domperidone jekiseni 【Zita Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye 【Major chirungiso】: Domperidone 【Description】: chigadzirwa Izvi Hauoneki pachena mvura 【Pharmacological Action】: zviri dopamine Kanotokonya antagonist; Domperidone chingamise dopamine kubva pakudzora rehove kusunungura GTH uye ovulation uyewo kusimbisa LHRH-A2 uye sGnRH-A kufurira GT ...
Operation Manual pamusoro Domperidone jekiseni
【Common Name】: Domperidone jekiseni
【Chirungu Name】: Domperidone jekiseni
【Zita Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye
【Major chirungiso】: Domperidone
【Pharmacological Action】: Zviri dopamine Kanotokonya antagonist; Domperidone chingamise dopamine kubva pakudzora rehove kusunungura GTH uye ovulation uyewo kusimbisa LHRH-A 2 uye sGnRH-A kufurira GTH kusunungurwa uye ovulation.
【Zvinoratidza】: Rinogona anorenda kushandiswa LHRH-A 2 kuti chakagadzirwa induction pamusoro empathema uye ovulation kuti hove
【Usage uye chipimo chemushonga】: Chokutanga, sanganisa chigadzirwa ichi vaine mari dzose sesaline kusvikira ose milliliter mvura ine 5 ~ 10mg domperidone. Chechipiri, vanosanganisa LHRH-A 2 kuti jekiseni nevamwe chakaipa sesaline kuwana LHRH-A 2 mhinduro ane wevasungwa 5 ~ 20μg / Rine mamiririta. Chinja runodiwa chipimo chemushonga uye sanganisa pamusoro maviri mhinduro. Zvadaro, shandisa musanganiswa kuti intraperitoneal jekiseni (nehwaro pectoral zenze) kana intramuscular jekiseni (pedo mujinga dorsal zenze). The chipimo chemushonga hove munhukadzi paminiti kilogram iri sezvinotevera:
kabhu, crucian kabhu uswa kabhu neKubhi, bighead dace bream clarias fuscus loach megalobrama amblycephala Erythroculter ilishaeformis
Black kabhu inoda majekiseni maviri. The chipimo chemushonga wokutanga jekiseni: Dom 5mg + LHRH-A 2 5μg; kuti jekiseni chechipiri kunopiwa kwapera 24 ~ 48 maawa ane chipimo chemushonga pamusoro Dom 5mg + LHRH-A 2 10μg.
Male mubereki hove chete inoda 1/2 of chipimo chemushonga nokuti apa hadzi mubereki hove
【Kwakaomarara Drug Zvaakazoita】 No rwakashata zvinodhaka maitiro inowanikwa kana zvavakabvumirana chipimo chemushonga chinotevererwa.
1. Parent hove kushandisa chigadzirwa ichi chinorambidzwa kudya nevanhu
2. Rinogona nechokwadi efficacy nani pane imwe mvura tembiricha 20 ~ 30 ℃. Kana tembiricha mvura kuvatumwa 20 ℃, migumisiro zviri kukonzera induction zvichabviswa zvishoma kukanganiswa.
3. zvakanyanyisa yakakwirira chipimo chemushonga kungaita kuti mangwanani ovulation uye huchachinja ayo chokubereka unodiwa.
4. Zviri nani kugadzirira mushonga asati kurishandisa. The wakagadzirira mushonga anofanira jekiseni mukati 0.5-1 awa.
Previous: Remubatanidzwa S-GnRHa For jekiseni (Ovuhom)
Next: LHRH-A2 kuti jekiseni Fish kushandiswa
Rainbow Farms Makemikari For Fish maberekero Ovaprim, Vandudzai zviri kukonzera Ovaprim